अर्बपति मुकेश आम्बानीको रहस्य – घरमा ६ सय कामदार, १७० भन्दा बढी कार
२७ माघ २०७७
भारतका व्यापारी मुकेश आम्बानीको नाम संसारकै धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश छ । आफ्नो कडा परिश्रम र समर्पणका साथ रिलायन्स इन्डस्ट्रीजका मालिक मुकेश आम्बानीले आफ्नो व्यापार बढाएका हुन् । आफ्नो टीमसँगै, उनले आफ्नो व्यवसायमा दिन र रात मेहेनेत गरिरहेका छन् ।
आम्बानी पनि शाही शैलीमा आफ्नो जीवन बिताउनका लागि परिचित छन् । उनको जीवनशैलीको बारेमा तपाईलाई कत्ति थाहा छ ? सायद निकै थोरै । हामी तपाईंलाई मुकेश आम्बानीको जीवन शैलीसँग सम्बन्धित धेरै विशेष कुराहरू बताउँछौं ।
घरमा ६ सय कामदार
मुकेश आम्बानीको घरलाई 'एन्टेलिया' भनिन्छ । उनी बस्ने घर पनि धेरै कारणले चर्चामा छ । एन्टिलिया अल्टामाउन्ट, मुम्बईमा अवस्थित छ । यो घरमा ६ सय जना कामदारहरू छन् । यो घरले एक साथ १ सय ६८ कारहरू पार्क गर्न सक्छ । घरको छतमा तीन हेलिप्याड छन् ।
यो मात्र होईन, उसको घरमा स्विमिङ पूल, स्पा कोठा सहित सबै सुविधाहरू छन्, जसले उसको घरलाई अरू भन्दा धेरै फरक बनाउँछ । यहाँ उनी आफ्नी आमा कोकिलाबेन अम्बानी, श्रीमती नीता आम्बानी र उनीहरूका बच्चाहरूसँग बस्छन् । बिजनेस ईन्साइडरको रिपोर्ट अनुसार यस विलासी घरको मूल्य १० हजार करोड हो ।
महंगा कारहरू राख्नु आम्बानीको विशेष सोख हो । उनीसँग विश्वमा सब भन्दा महँगो कारहरू छन् । मिडिया रिपोर्ट अनुसार, उनीसँग १ सय ७० भन्दा बढी कारहरू छन् । यो मात्र होइन, उनको एउटा कार बीएमडब्ल्यु पूर्णतया बुलेटप्रुफ छ । यस कारको मूल्य ८ करोड ५० लाख भारतीय रुपैयाँ हो । यस कारमा ल्यापटप, टिभी स्क्रिन, कन्फरेन्स सेन्टर जस्ता धेरै सुविधाहरू छन् ।
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच बिहीबार औपचारिक मर्जर
संक्रमितको शव व्यवस्थापन परिवारले नै गर्न पाउने, मलामी २५ जना मात्र
रूसको एक विद्यालय भवनमा आक्रमण, बालबालिकासहित ११ को मृत्यु
महामारीले थलिएको आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी सघाउनुपर्छ सरकारले?
गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुव्वा नियुक्त, आजै सपथ
नेपालमा पहिलोपटक १ लाख नाघे कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित
कमलपोखरी पुननिर्माण ८० प्रतिशत काम सम्पन्न
नयाँ भेरियन्टका कारण बढी छ जोखिम
ओलीले लात हानेपछि प्रचण्डलाई ठिक भएको छ: देउवा
'घुर्ने व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप, ह्दयघात र मस्तिष्कघात हुनसक्छ'
पुनरागमन हुँदै गरेको बजारमा फेरि बन्द गर्ने सोच्‍न पनि हुँदैनः वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत
परीक्षाहरु तोकिएकै समयमा सञ्चालन हुन्छन्–प्रवक्ता, दीपक शर्मा
► Play 3312
► Play 556